Imirikiti ụdị ọrịa kansa na - eme ka ọ dịrị na homonụ testosterone ka itolite ma gbasaa n’ahụ gị. Agbanyeghị, Leuprorelin acetate ntụ ntụ na-arụ ọrụ site na-egbochi mmepụta nke homonụ testosterone na-eme ka ọ dị mfe belata uto nke mkpụrụ ndụ cancer prostate ma belata ihe mgbu ma ọ bụ ihe isi ike ndị ọrịa na-enwe mgbe ị na-apụ.
N'aka nke ọzọ, ụmụ nwanyị jiri Lupron na-agwọ ọrịa mgbaàmà endometriosis, nke a na-akpọkarị fibroids uterine. Leuprolide acetate na ịtụrụ ime bụ ihe kacha ewute ụmụ nwanyị, a takeụla ọgwụ a ma ọ bụrụ na ị na-atụ anya ịmụ nwa mana gị na dọkịta gị ga-ekwurita nke ahụ. Lupron bụ ọgwụ a na-eji abanye n’ahụ nke ekwesịrị itinye n’arụ ahụ kwa ọnwa 1-6. Gbalịsie ike na ị takeụrụ ọgwụ gị site na dọkịta gị, mana enwere ike zụọkwa gị otu esi abanye onwe gị maka nchịkwa usoro ọgwụ dị mfe n'oge nkasi obi nke ụlọ gị.
Leuprolide acetate zụrụ na ngwa ahịa dị n'ịntanetị na nke anụ ahụ. Ọnụ leetrolide acetate nwere ike ịdị iche mgbe ụfọdụ dabere na ebe ịzụrụ ya. Agbanyeghị, ọ bụ ihe amamihe dị na ya ịnweta ọgwụ ziri ezi site n'aka ndị ọkachamara n'ihe gbasara ọgwụ. Cheta ịdoụ ọgwụ agupate ma ọ bụ ị misụbiga ya ókè nwere ike ibute nsonaazụ na-adịghị mma, ị ga-ezekwa ị takingụ ya n'emeghị nyocha ahụike. Ọrịa cancer bụ ọrịa siri ike, ịkwesighikwa ị riskụ ọgwụ ya n'echeghị eche. Gwa dọkịta gị maka ozi ndị ọzọ gbasara leuprorelin acetate ntụ ntụ usoro onunu ogwu.
The leuprorelin acetate usoro onunu ogwu kwesịrị itinye n ’ahụ gị site na uru ahụ. Jiri sirinji insulin na U-100 jikwaa usoro ị na -eri ma hụkwa na ị na-eji sirinji nke ndị nrụpụta nyere. Ọ bụrụ na ịkwesịrị iji sirinji dị iche, mgbe ahụ jiri naanị ihe 0.5-mL na-ekpofu. Cheta na leuprorelin acetate ntụ ga-agwakọta dịka onye nrụpụta kọwara ya tupu ejiri ya. Kingme ihe ngwọta ahụ nwere ike ọ gaghị enye gị ngwakọta zuru oke. Mkparịta ụka Leuprolide ga - enyere gị aka inweta nsonaazụ ịchọrọ mana nweta ya na dọkịta gị mgbe niile.
Usoro Leuprorelin acetate na-eme ihe dabere n'ọnọdụ ahụike dị n'okpuru ọgwụgwọ. Dịka ọmụmaatụ, mgbe ejiri ya maka ọgwụgwọ ọrịa cancer, ọ na-ebelata mmepụta homonụ testosterone, nke na-enyere uto na mgbasa nke mkpụrụ ndụ kansa. Ọ bụ ezie na Leuprorelin Acetate ntụ ntụ (74381-53-6) iji ọgwụgwọ anaghị agwọ ọrịa cancer, ọ na - enyere aka belata ihe mgbu na uto nke mkpụrụ ndụ cancer na ahụ gị. Agbanyeghị, enwere ike ị drugụ ọgwụ a naanị, mana ndị na-ahụ maka ọgwụ na-atụ aro ka ị jikọta ya na ọgwụ ndị ọzọ na-akpata ọrịa cancer maka nsonaazụ ka mma.
Ọ bụ ezie na akwadoghị ọgwụ ahụ maka iji ụmụ nwanyị na mba ụfọdụ, ọ gosipụtara na ọ dị irè na ọgwụgwọ endometriosis. N'ebe a, ọgwụ ahụ na-arụ ọrụ site na-egbochi mmepụta estrogen n'ime ahụ gị, nke a na-akpọkarị 'estrogen Surgery.' N'ebe a, usoro Leuprorelin acetate na-arụ ọrụ na-elekwasị anya na mbenata estrogen, hormone nke na-ahụ maka oge gị. Mgbe ịmalite ị leụ ọgwụ leuprorelin acetate, ọkwa estrogen ga-ebili n’izu ndị mbụ, emesia ọkwa estrogen ga-agbadata. Usoro a nwere ike ịkwụsị oge gị ruo nwa oge, yana n'ihi nke a, a ga-akwụsịlata mgbaàmà endometriosis.
N'aka nke ozo, Leuprorelin acetate cancer, na enye aka n’oruso oria ojoo a bu ndi nwanyi aka. Ọ bụ ezie na progesterone na estrogen abụghị ihe kpatara ọrịa cancer ara, ha na-arụ ọrụ dị mkpa n'inyere uto ha na mgbasa. Enwere ike ịkwụsị mmepụta nke homonụ abụọ ndị a site na usoro ịwa ahụ iji wepu akụkụ ma ọ bụ usoro ọgwụgwọ.
Luteinizing homonụ nke pituitary gland mepụtara, na-akpali mmepụta nke progesterone na estrogen site na ụmụ nke ụmụ. Ọgwụ leuprorelin acetate na-egbochi mmepụta homonụ luteinizing, yabụ belata estrogen na ọkwa progesterone n'ahụ gị. Nke ahụ pụtara na uto mkpụrụ ndụ kansa na agbasa ga-ebelata, na-eme ka ọ dịrị mfe ịchịkwa cancer kansa.
Enwere ike ịme nchịkwa leuprorelin acetate n'ụzọ abụọ bụ isi site na ntụtụ ozugbo ma ọ bụ ntụ ntụ, nke a na-ejikọghachi ya na ihe mgbaze tupu ị theụ usoro onunu ogwu. Ndị dọkịta bụ ndị kachasị mma iji usoro anyị abụọ, mana mgbe ị zụrụ ọzụzụ, ị nwere ike ịme ya ngwa ngwa n'ụlọ.
Ọkpụkpụ Leuprorelin acetate bụ ọgwụ na-arụ ọrụ ogologo oge nke etinyere intramuscularly kwesịrị ka ọ bụrụ ọkachamara nke ọgwụ. A na-enyekarị ogwu ogbugba otu ugboro n'ọnwa ọ bụla ma ọ bụ ọbụna otu oge ọ bụla 3, 4, ma ọ bụ 6 ọnwa dabere n'ọnọdụ gị. N'aka nke ozo, inuprorelin acetate injection nwere ike inye oge ụfọdụ ka ọ bụrụ nkwusioru ogologo oge a na-akpọkarị (Eligard) nke a na-etinye n'ime akwara gị kwa ọnwa 1, 3, 4, ma ọ bụ 6.
Mgbe nyochachara ahụike, dọkịta gị ga-enye gị ndụmọdụ dọọ kwupụtara gị ma nye gị ọgwụ peptide ntụ ntụ kachasị mma maka gị. Dọkịta gị ga-ekpebi oge oge ịsụ ọgwụ gị ga -eche maka ya. Ọgwụ ndị a na-agba na-adịkarị site n'otu onye gaa na nke ọzọ.
Mgbe ụfọdụ ị nwere ike kpebie iji leuprorelin ntụ ntụ, nke bụkwa ụdị ike ọgwụ a na-enye aka na-alụ ọgụ ọnọdụ ahụ ike dị iche iche, dị ka anyị kwuru na mbụ. Agbanyeghị, Leuprorelin acetate ntụ ga-akwadorịrị nke ọma ma ọ bụ jighachi ọzọ tupu etinye ya n’olu gị. Ekwesịrị inyocha ntụ ntụ ma ekwesighi iji sirinji nwere mmerụ. Mgbe ị na-akwadebe acupate leuprorelin, jiri diluent nke ndị na-emepụta ọgwụ nyere ya. Gbanye igwe na-acha ọcha n'ime ebe a na-adọwa anụ ahụ ruo mgbe ọ malitere ịtụgharị, jide n'aka na ijide sirinji ahụ ka ọ kwụ ọtọ. Ugbu a hapụ ihe mgbapụta ahụ site na iji nwayọọ na - adụ onye na - anya mmanụ ihe dị ka sekọnd 8 ruo mgbe topa mbụ rutere ahịrị na-acha anụnụ anụnụ n'etiti agba. N'oge a niile, dobe sirinji ka ọ kwụ ọtọ.
Nlekọta Leuprorelin acetate bụ naanị ọgwụ ịgba, yana ịkwesịrị inweta ọgwụ gị oge niile site n'aka ndị ọkachamara ahụike maka nsonaazụ ka mma. Dika ị na-enyo enyo na ị nwere ọnọdụ nke ntụpọ peptide a nwere ike ịgwọ ya, azụta ma bido iwe ya na-enweghị nyocha ahụike. Ndị na-emepụta acupate Leuprolide nwere ike igosipụta usoro ị drugụ ọgwụ ahụ na ntuziaka ojiji, mana nke ahụ nwere ike ọ gaghị abara gị uru.
Usoro ọgwụgwọ a tụrụ aro maka ndị ọrịa endometriosis bụ 3.75mg, nke a ga-agbanye ya n’otu oge kwa ọnwa ihe dị ka ọnwa isii. Enwekwara nhọrọ ozo ebe dọkịta gị nwere ike ịtụ aro 11.25mg, nke ị ga-agbanye n’otu oge kwa ọnwa atọ. Womenmụ nwanyị na-a leụ leuprorelin maka endometriosis kwesịkwara ịtụle ịga maka ọgwụgwọ nnọchi homonụ, nke kachasị mma maka ibelata ihe mgbaàmà vasomotor na ọnwụ nke nkwụghachi nke ọkpụkpụ. Agbanyeghị, ekwesịrị ịtụle uru ọgwụgwọ ọ bụla ga-adị tupu oge ị na-ahọrọ usoro ọgwụgwọ kwesịrị ekwesị.
Cheta, dọkịta gị bụ ezigbo mmadụdobere usoro ọgwụgwọ nke Leuprorelin maka ndị okenye na ụmụaka mgbe ha nyochasịrị ọnọdụ ahụike. Mgbe ụfọdụ enwere ike ịgwa gị ka ịmalite site na obere usoro onyonyo, nke enwere ike idozi ya na oge mgbe ị lechara ahụ gị anya. Anaghị anabata Leuprolide acetate na ịtụrụ ime n'ihi na ọgwụ ahụ nwere ike imerụ nwa e bu n'afọ. A dụrụ ụmụ nwanyị ọdụ ka ha ghara ị powderụ ọgwụ a peptide mgbe ha dị ime ma ọ bụ mgbe ha na-eme atụmatụ ịtụrụ ime n'oge ọ bụla.
N'ọtụtụ oge, mgbe ị jiri ma ọ bụ doụọ ọgwụ ọ bụla, ị ga - ekpughere gị mmetụta dị njọ; agbanyeghị, ike ahụ gị mgbe ụfọdụ nwere ike ikpebi ike nsonaazụ ya. Otu ihe ahụ na - eme mgbe ị na - esoghị ntuziaka usoro usoro ọgwụgwọ mgbe ị na - a leụ leuprorelin acetate. Warndọ aka na ntị Leuprolide nwere ike ịdị iche iche site n'ihe dị iche iche, dịka ogo ahụ na nnabata anụ ahụ. Usersfọdụ ndị ọrụ na-enwe mmetụta dị n'akụkụ ọbụlagodi mgbe ha na-eme mmekọrịta mmekọrịta leuprolide dị ala ebe ndị ọzọ nwere ike ị takeụ ọgwụ dị elu ma ka na-enweta uru ahụ.
Na mmechi, leuprorelin acetate abụrụla nnukwu ọgwụ mgbe ejiri ya mee ihe n'ụzọ ziri ezi na ahụike. N'otu oge ahụ, leuprolide acetate buy dị na ụlọ ahịa ọgwụ kacha nso, ị nwekwara ike ịme iwu gị na ụlọ ahịa dị n'ịntanetị dị iche iche. Enwere ọtụtụ ndị na-emepụta acupate leuprolide na ndị na-eweta ahịa na ahịa taa, mana gbaa mbọ hụ na ị na-eme nyocha gị ka ị nweta ngwaahịa dị mma na ọnụahịa dị mma. Na ọnụ ahịa leuprorelin acetate dịgasị iche site na otu onye na-ere ahịa, ọ bụ ya mere ịkwesịrị ịme nyocha kwesịrị ekwesị tupu ịzụta ọgwụ ahụ. Agbanyeghị, ewerela ọgwụ ara ara leuprorelin acetate tupu ị nweta ọgwụ ọ bụla n'aka dọkịta gị.
Abụ, G., Gao, H., & Yuan, Z. (2013). Mmetụta leuprolide acetate na arụ ọrụ ovaria mgbe cyclophosphamide – doxorubicin sitere na mmiri ọgwụ na premenopausal ọrịa nwere ọrịa ara: na-esite na ọnwụnwa nkewa II. Oncology ọgwụ, 30(3), 667.
Köhler, G., Faustmann, TA, Gerlinger, C., Seitz, C., & Mueck, AO (2010). Ihe omumu ihe omuma iji gosiputa oru na nchekwa nke 1, 2, na 4 mg nke dienogest kwa ubochi maka endometriosis. International Journal of Gynecology & Obstetrics, 108(1), 21-25.
Tunn, UW, Gruca, D., & Bacher, P. (2013). Ọnwa isii leuprorelin acetate depot formulations na ọrịa prostate dị elu: nyocha nyocha nke ụlọ ọgwụ. Ihe ntinye ogwu, 8, 457.
Johnson, SR, Nolan, RC, Grant, MT, Ọnụahịa, GJ, Siafarikas, A., Bint, L., & Choong, CS (2012). Ọkpụkpụ etisasị etolite na-ejikọ ya na ọgwụgwọ ọrịa depot leuprorelin acetate maka puberty nke isi. Journal nke paediatrics na ahụike ụmụaka, 48(3), E136-E139.